साउनमा यी सामान किनेमा भाग्य चम्किने ! – Sandesh Press
July 17, 2021 334
काठमाडौं – अहिले साउन महिना चलिरहेको छ । साउन महिनामा हिन्दू नारीहरुले हरियो चुरा, हरियो कपडा लगाउने गर्छन् । साउनको हरेक सोमबार शिवजीको व्रत पनि बस्छन् । साउनको सोमबारलाई बिशेष बारको रुपमा पनि लिइन्छ ।साउन महिनामा भगवाल शिवलाई खुशी बनाउन बिभिन्न उपायहरु गर्न सकिन्छ । केही यस्ता बस्तुहरु छन् जुन बस्तु यस महिनामा किनेर ल्याउदा भाग्य फेरीने विश्वास छ । साउन महिनामा डमरु वा त्रिशुल घरमा ल्याएमा घरमा राम्रो हुने बिश्वास छ ।
साउनमा त्रीशुल घरमा ल्याउदा वर्ष भरी रक्षा हुने र डमरु ल्याएमा आसपासका नकरात्मक शक्ति हट्ने बिश्वास छ । त्यस्तै साउनमा शिवको मन्दिरमा चाँदीको डब्बा राखेर डब्बा भित्र मह राखेमा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै चाँदीको वाला, चाँदीको चन्द्रमा ल्याएर पुजा गर्दा राम्रो हुने बिश्वास छ । चाँदीको चन्द्देव ल्याएर पुजा गर्दा चन्द्र ग्रह शान्ती हुन्छ र मन बलियो हुने बिश्वास छ । त्यस्तै यस महिनामा नाग–नागिन जोडीएको चाँदीको पत्ता घरमा राखेमा पिर्त दोषबाट राहत मिल्ने बताइन्छ । त्यस्तै यस महिनामा गंगा जल घरमा ल्याएर पुजा गर्दा राम्रो हुने बिश्वास छ ।काठमाडौं – अहिले साउन महिना चलिरहेको छ । साउन महिनामा हिन्दू नारीहरुले हरियो चुरा, हरियो कपडा लगाउने गर्छन् । साउनको हरेक सोमबार शिवजीको व्रत पनि बस्छन् । साउनको सोमबारलाई बिशेष बारको रुपमा पनि लिइन्छ ।साउन महिनामा भगवाल शिवलाई खुशी बनाउन बिभिन्न उपायहरु गर्न सकिन्छ । केही यस्ता बस्तुहरु छन् जुन बस्तु यस महिनामा किनेर ल्याउदा भाग्य फेरीने विश्वास छ । साउन महिनामा डमरु वा त्रिशुल घरमा ल्याएमा घरमा राम्रो हुने बिश्वास छ ।
साउनमा त्रीशुल घरमा ल्याउदा वर्ष भरी रक्षा हुने र डमरु ल्याएमा आसपासका नकरात्मक शक्ति हट्ने बिश्वास छ । त्यस्तै साउनमा शिवको मन्दिरमा चाँदीको डब्बा राखेर डब्बा भित्र मह राखेमा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै चाँदीको वाला, चाँदीको चन्द्रमा ल्याएर पुजा गर्दा राम्रो हुने बिश्वास छ । चाँदीको चन्द्देव ल्याएर पुजा गर्दा चन्द्र ग्रह शान्ती हुन्छ र मन बलियो हुने बिश्वास छ । त्यस्तै यस महिनामा नाग–नागिन जोडीएको चाँदीको पत्ता घरमा राखेमा पिर्त दोषबाट राहत मिल्ने बताइन्छ । त्यस्तै यस महिनामा गंगा जल घरमा ल्याएर पुजा गर्दा राम्रो हुने बिश्वास छ ।
Prevआमा बितेपछि सेतै कपडामा भ्वाइसको स्टेजमा पुगेर सबैलाई रुवाए ट्याक्सी चालक कर्णले
Nextमेरी बास्सै’ टेली चलचित्रकी चम्सुरी पल्पसा डंगोललाई यो के भयो ? टिचिङ अस्पतालमा गरियो भ’र्ना
मन्दिरमा किन चढाइन्छ नरिवल ? यस्तो छ भ्रम र वास्तविकता